Xiddig ka tirsan Man United ee aan aheyn Pogba iyo Sánchez oo qarka u saran inuu ka dhaqaaqo Old Trafford – Gool FM
Xiddig ka tirsan Man United ee aan aheyn Pogba iyo Sánchez oo qarka u saran inuu ka dhaqaaqo Old Trafford
(Manchester) 27 Agoosto 2019. Kaddib markii laga dhex waayay qorshaha tababare Ole Gunnar Solskjær ee kooxda Manchester United ayaa waxay dhalisay in shaki xoogan la galiyo mustaqbalka xiddiga reer Brazil Fred ee garoonka Old Trafford.
Sida laga soo xigtay wargeyska “Football Italia” kooxda Fiorentina ayaa waxay dooneysaa inay la soo wareegto xiddiga reer Brazil ee Fred inta lagu gudi jiro suuqan xagaaga.
Maamulka kooxda Fiorentina ayaa waxay kasoo gudbiyeen xiddiga reer Brazil ee Fred qiimo lacageed gaaraya ilaa iyo 20 milyan oo euro si ay u helaan adeegiisa, iyadoo 16 milyan oo euro si hormaris ah ay u bixin doonto naadiga reer Talyaani, iyo 4 milyan euro oo guno ah.
Dhinaca kale wargeyska “Times” ayaa sheegay in tababare Ole Gunnar Solskjær uu ka balan qaaday Fred inuu siin doono fursado badan, kaddib kulan dhexmaray labadooda isbuucii lasoo dhaafay.
Xiddiga reer Brazil ee Fred ayaa ku soo bilaawday kaliya 7 kulan tan iyo markii uu kooxda yimid tababare Ole Gunnar Solskjær, iyadoo laga war qabo in Red Devils ay kala soo wareegtay xiddigan qiimo dhan 60 milyan euro xagaagii hore kooxda Shakhtar Donetsk.
Wafdi ka so coda Barcelona oo gaaray Paris & faahfaahinta dalabkooda ugu dambeya ay ku soo xero galinayaan Neymar Jr
Kooxda Horseed oo soo gaartay Magaalada Muqdisho, xilli todobo ciyaaryahan ay ka soo hareen